DIRECTX: 9.0C, 10, 11. OLEE OTú Ị GA-ESI CHỌPỤTA NSỤGHARỊ ARỤNYERE? ESI WEPU DIRECTX? - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Eleghị anya, ọtụtụ, karịsịa ndị na-egwu egwuregwu kọmputa, anụwo ihe dị egwu dịka DirectX. Site n'ụzọ, ọ na-abịakarị na egwuregwu na mgbe ọ wụnye egwuregwu ahụ n'onwe ya, ọ na-eweta imelite mbipute DirectX.
N'isiokwu a, m ga-achọ ịmatakwu ihe gbasara ajụjụ ndị metụtara ugboro ugboro banyere DirectX.
1. DirectX - gịnị ka ọ bụ na gịnị mere?
2. Ụdị nsụgharị nke DirectX ka arụnyere na usoro ahụ?
3. Ntuziaka DirectX maka nbudata ma melite
4. Esi ewepụ DirectX (mmemme iji wepu)
DirectX bụ nnukwu ọrụ nke eji arụ ọrụ mgbe ị na-emepe ọnọdụ Microsoft Windows. Ọtụtụ mgbe, a na-eji ọrụ ndị a na mmepe nke egwuregwu dị iche iche.
Ya mere, ọ bụrụ na e mepụtara egwuregwu ahụ maka kpọmkwem ụdị DirectX, mgbe ahụ, a ghaghị itinye otu mbipute (ma ọ bụ karịa na nso nso a) na kọmputa nke ọ ga-agba ọsọ. Ọtụtụ mgbe, ndị mmepe egwuregwu na-agụnye ngwa ziri ezi nke DirectX na egwuregwu ahụ. Mgbe ụfọdụ, Otú ọ dị, e nwere ihe ndabere, ndị ọrụ ga-ejikwa aka na-achọ nsụgharị ndị dị mkpa ma wụnye ha.
Dịka iwu, usoro ọhụrụ nke DirectX na-enye foto ka mma na nke ka mma (ọ bụrụhaala na egwuregwu a na-akwado egwuregwu na kaadị vidiyo). Ee ọ bụrụ na e mepụtara egwuregwu ahụ maka usoro nke itoolu nke DirectX, ma ị nweta nkwalite nke 9 nke DirectX gaa na 10th version na kọmputa gị - ị gaghị ahụ ihe dị iche!
Windows enweela ndabara ndabara nke Directx wuru na ndabara. Dịka ọmụmaatụ:
Iji chọpụta onye nke mbipute nke arụnyere n'ime usoro ahụ, pịa bọtịnụ "Win + R" * (bọtịnụ ndị dị irè maka Windows 7, 8). Mgbe ahụ, na "ọsọ" tinye iwu "dxdiag" (na-enweghị ruturu).
Na windo nke meghere, ṅaa ntị na akara ala. N'okwu m, nke a bụ DirectX 11.
Iji chọpụta ozi zuru oke, ịnwere ike iji ngwaọrụ pụrụ iche iji chọpụta njirimara nke kọmputa (otu esi akọwa njirimara nke kọmputa). Dịka ọmụmaatụ, M na-ejikarị Everest ma ọ bụ Aida 64. Na isiokwu, na njikọ dị n'elu, ị nwere ike imata onwe gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Iji chọpụta nsụgharị nke DirectX na Aida 64, gaa na mpaghara DirectX / DirectX - video. Lee nseta ihuenyo n'okpuru.
Ejiri usoro nke DirectX 11.0 arụ ọrụ.
Ọ na-abụkarị iji wụnye ngwa ngwa DirectX iji mee nke a ma ọ bụ egwuregwu ahụ. Ya mere, na echiche, ọ dị mkpa inye naanị otu njikọ na DirectX 11. Otú ọ dị, ọ na-emekwa na egwuregwu ahụ jụrụ ịmalite na chọrọ nkwụnye nke otu nsụgharị ụfọdụ ... Na nke a, ị ghaghị iwepụ DirectX site na usoro wee wụnye mbipute nke ejikọtara ya na egwuregwu * (lee isiokwu na-esonụ nke isiokwu a).
Ndị a bụ nsụgharị kachasị ewu ewu nke DirectX:
1) DirectX 9.0c - akwado usoro Windows XP, Server 2003. (Jikọọ na weebụsaịtị Microsoft: budata)
2) DirectX 10.1 - gụnyere DirectX 9.0c components. Osise a na-akwado OS: Windows Vista na Windows Server 2008. (budata).
3) DirectX 11 - gụnyere DirectX 9.0c na DirectX 10.1. A na-akwado usoro a site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke OSs: OS Windows 7 / Vista SP2 na Windows Server 2008 SP2 / R2 na usoro x32 na x64. (download).
Kasị mma Wepu ngwa ngwa web site na Microsoft - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35. Ọ ga-elele anya Windows na imelite DirectX na nsụgharị ziri ezi.
N'eziokwu, ọ dịtụbeghị mgbe m hụrụ ya n'onwe m, iji melite DirectX, ịkwesịrị iwepụ ihe ma ọ bụ, na nke ọhụrụ nke DirectX, egwuregwu e mere maka onye meworo agadi agaghị arụ ọrụ. A na-emekarị ihe ọ bụla na-akpaghị aka, onye ọrụ naanị ga-agba ọsọ weber (njikọ).
Dịka nkwupụta nke Microsoft n'onwe ya, ọ gaghị ekwe omume iwepụ DirectX kpam kpam site na usoro ahụ. N'ikwu eziokwu, agbaghị m mbọ iwepu ya onwe m, mana e nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe na netwọk ahụ.
Onye nchikota ndi ozo
A na-eji ngwa bara uru DirectX Eradicator iji wepu kernel DirectX na Windows. Ihe omume a nwere ihe ndị a:
Ọrụ akwadoro na nsụgharị DirectX site na 4.0 ruo 9.0c.
Wezuga faịlụ na nchekwa dị mkpa site na usoro.
Nhichapu ndenye aha.
Directx egbu egbu
Emere usoro a iji wepu ngwa DirectX na kọmputa gị. DirectX Killer na-agba ọsọ na sistemụ arụmọrụ:
Ezi Direct Obi ụtọ iwepụ
Onye Mmepụta :www.superfoxs.com/download.html
Osise osiri akwado os: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1, tinyere usoro x64.
DirectX Obi ụtọ iwepụ bụ ihe bara uru maka kpamkpam ma wepụ nsụgharị nke DirectX site na sistemụ arụmọrụ Windows, tinyere DX10. Ihe omume ahụ nwere ọrụ nke ịlaghachi API na ọnọdụ ya gara aga, ya mere ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịghachite DirectX kpam kpam.
Ụzọ iji dochie DirectX 10 na DirectX 9
1) Gaa na menu Malite ma mepee windo "Run" (bọtịnụ Win + R). Wee pịnye iwu regedit na windo ma pịa Tinye.
2) Gaa na HKEY_LOCAL_MACHINE Software na DirectX alaka Microsoft, pịa Version ma gbanwee 10 ruo 8.
3) Tinyezie DirectX 9.0c.
Nke ahụ niile. Achọ m ka ị bụrụ egwuregwu dị egwu ...